Foano ny « halako bika, tsy tiako tarehy » | NewsMada
Foano ny « halako bika, tsy tiako tarehy »
Na inona na inona fandaharanasan’ny mpitondra, tsy izay ihany no iankinan’ny fanovana sy fampandrosoana ity firenena ity. Maro ny zavatra tokony hahitsy, indrindra amin’ny fisainana sy ny fomba fijery, izay samy mibaiko ny fanapahan-kevitra manoloana tranga na olana samihafa.
Iray amin’ireny ny halako bika, tsy tiako tarehy, izay mbola nitarika ny safidin’ny sasany tamin’ireny fifidianana nifanesy ireny. Tsy misy fijerena foto-kevitra, tsy misy fandinihana lalina ary tsy misy koa, noho ireo rehetra ireo, tanjona mazava. Mipetraka io olana io na eo amin’ny fanaovana politika na hatrany amin’ny fiarahamonina, sahanin’ny fokontany, amin’ny ankapobeny.
Ho an’ny eny ifotony, tsy vitsy ny tsy mifankahazo noho ny olana madinika, izay mety ho voavahan’ny dinidinika ihany. Rehefa misy ny fivoriana na fanapahan-kevitra ilàna ny hevitry ny maro, apetraky ny sasany foana io « halako bika, tsy tiako tarehy » io. Tsy mba misy fihainoana sy fandalinana ny hevitry ny hafa fa ny fankahalana no mandeha aloha.
Eo amin’ny tontolo politika, toy ny fahavalo na ny mihoatra izany mihitsy ny iheveran’ny andaniny ny ankilany, hany ka na hevitra mety hampahomby zavatra aza, raisina ho tsy manjary avy hatrany. Eo koa ny fanilikilihana izay tsy mpiray petsapetsa na mpiara-nanohana. Ny hevitra, anefa, tera-bary; ny hevitry ny maro, mahataka-davitra… Fahendren’ny razantsika avokoa ireo, izay samy manome lanja ny olona tsirairay, ao anaty fiarahamonina.
Efa nisafidy ny lalana sy ny lalàn’ny demokrasia i Madagasikara, ka na inona na inona ambara, tokony halalaka ny fanehoan-kevitra ary tsy maintsy misy ny mpanohitra. Tsy fotoan’ny fijerena tavan’olona intsony izao. Asa, avy hatrany, no tian’ny fitondrana tanterahina ka tsy ireo “tsy maty voalavo an-kibo” no handeha hanao vato misakana tsy hanatrarana ny tanjona. Na izany aza, aleo halevina impito mandrifotr’olona ny “halako bika, tsy tiako tarehy” ka rehefa hita fa hevitra mahomby, mba hiaraha-manatontosa fa tsy hotoherina fahatany.